Inkakha yeBanyana izoncelisa amawele ngeSafa
UYINXUSA le-Africa 5s lapha u-Amanda Dlamini uthathwe noSamuel Eto waseCameroon, emcimbini obuseThekwini ngo-2019 Isithombe: BACKPAGEPIX
Malibongwe Mdletshe | July 18, 2021
IZONCELISA amawele ngokuqhubeka nomsebenzi wayo wokuhlaziya ibhola kwiSuperSport TV inkakha yeBanyana Banyana, u-Amanda “Toki“ Dlamini, kuleli sonto owethulwe esikhundleni esisha kwiSouth African Football Association (Safa).
UDlamini (32), ongene emlandweni ehola iBanyana iqala ukudlala kuma-Olympic Games ngesikhathi izibekisela indawo kwaweseLondon ngo-2012, wethulwe kwesokuba yiSenior Manager for Commercial and Marketing.
Lokhu kusho ukuthi uzohola uphiko lwezokukhangiswa kwenhlangano ngokusebenza eduze nabaxhasi bayo nokuqhamuka nezindlela zokufaka iSafa ezinhlizwei zabatshalizimali.
Engxoxweni ekhethekile neSolezwe ngoMgqibelo, uDlamini uveze ukuthi eminye yemicikilisho enkontilekeni yokuqashwa kwakhe kwiSafa, ugunyaziwe ukuthi angaqhubeka nomsebenzi wokuhlaziya kwiSuperSport, inqobo nje uma kungezukuba khona ukungqubuzana.
“Ngiyazibongela kakhulu ngokunikwa leli thuba (kwiSafa). Kuhle kakhulu ngoba ngisazoqhubeka nokuba yingxenye enkulu yebhola ngoba ezinkontilekeni kuvunyelwane ukuthi ngingaqhubeka nokuhlaziya, inqobo nje uma kungezukushayisana nezinhlelo nezikhathi,” kusho uDlamini.
UDlamini ungomunye wabantu abayimele iBanyana emidlalweni eminingi engaphezu kuka-100, kweminye yayo engukaputeni wezintokazi.
“Kuhle ukuthi abantu abalidlalile ibhola banikwe amathuba okuphinda basebenzele inhlangano ezinhlakeni ezahlukene. Siyethemba lokhu kuzoqhubeka,” kusho uDlamini.
Ngo-2018 wethulwe waba ngesinye sezilomo kwezemidlalo eziba ngamanxusa amaLaures Sports for Good Foundation.
Ngaphandle kwamava okudlala ibhola iminyaka emele iBanyana, uDlamini oqale ukudlala kwiDurban Ladies ngaphambi kokuya e-University of Johannesburg, wenze neziqu emkhakheni wezokuthutha (Logistics).
“Kuhlezi kukuhle ukuba nesicucu. Kuzongisiza kakhulu kule msebenzi ukuthi vele nami ngiyenzile i-marketing njengengxenye yeziqu kwiLogistics - Freight. Kuningi engikufundile enginesiqiniseko sokuthi ngizokudinga ukuphumelela kulo msebenzi,” kusho uDlamini.
“Sengizoba ngumuntu wehhovisi kakhudlwana ngoba ngisazosebenza nomeluleki ozongicija kulo msebenzi. Lokho kusho ukuthi kuzokwenzeka ngiyikhethe imidlalo mhlawumbe le eba phakathi nezinsuku.
“Kuyajabulisa ukuthi isikhulu esiphezulu nomengameli bangithembisile ukuthi bazokuqikelela ukuthi ngithola ukwesekwa okufanele negizokudinga.”
Isikhulu esiphezulu, uTebogo Motlanthe, sithe ukuqokwa kukaDlamini, “kuhambisana nenkambiso yenhlangano yokuqokela ezikhundleni zokuphathwa kwebhola izinkakha.”